भिएफएक्सले ‘ब्ल्याक’मा बढ्यो बजेट ! « Ramailo छ
भिएफएक्सले ‘ब्ल्याक’मा बढ्यो बजेट !
प्रकाशित मिति : Apr 25, 2018
समय : 1:50 pm
जेठ ११ बाट दर्शकमाझ आउँने फिल्म ब्ल्याकको भिएफएक्समा झण्डै एक वर्ष समय लगाइएको निर्देशक प्रदीप श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् । ’फ्लोरमा जति खर्च र मेहनत गरियो, त्यो भन्दा बढि त प्रविधिसँग जुध्नुपर्यो, निर्देशक श्रेष्ठको भनाई छ ।
उनका अनुसार फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली फिल्मको स्तर उकास्न भिएफएक्समा लगानी र समय खर्चिएको हो । ब्ल्याकको ’पल पल हरपल’ गीतमा पनि भिएफएक्सको अत्याधिक प्रयोग गरिएको छ । ‘विदेशी फिल्महरुमा देखिएका कुरा खिच्नलाई असम्भव होला । तर पर्दामा प्राकृतिक देखिने दृश्य नेपाली फिल्ममा पनि प्रयोग गर्न र देखाउन सकिन्छ भनेरै ’ब्ल्याक’ देखाएका छौं’, श्रेष्ठले भने ।
’भिएफएक्सकै कारण छायाँकनदेखि पोष्ट प्रोडक्सनसम्मको समय लम्बियो फिल्मको आधाजस्तो बजेटको हिस्सा यसले मात्रै रिजर्भ गरेको छ’ उनले थपे । समिर मियाले गरेको भिएफएक्समा दर्शकले प्राकृतिक लाग्ने सौन्दर्य देख्न पाउने श्रेष्ठको दाबी छ । मौनता श्रेष्ठको कथामा तयार भएको ’ब्ल्याक’ मा नायक आकाश श्रेष्ठ र नायिका आँचल शर्माको मुख्य भूमिका छ । आश्मा पाण्डेको निर्माण रहेको फिल्मलाई रामशरण उप्रेतीले खिचेका छन् । फिल्मको गीतमा रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी छ । आकाश र आँचलसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
द्वन्द्व चन्द्र पन्तको रहेको फिल्मलाई अर्जुन जिसीले सम्पादन गरेका हुन् । उपत्यकामा गोविन्द शाही र मोफसलमा उज्जल पौडेल, मनोज राठीले ‘ब्ल्याक’लाई वितरणको जिम्मा लिएका छन् । फिल्ममा आकाश र आँचलसँगै आयुष रिजाल, सुशिल क्षेत्री, धिरेन शाक्य, प्रिया रिजालको मुख्य भूमिका छ ।